> Resource > Video > Sida loo rogo ama faylasha M4V on Windows / Mac
Wondershare M4V Converter waa xirfad M4V video Converter ah, taasoo aan sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo wax video in M4V si fudud, laakiin sidoo kale kaa caawin in aad beddelid files M4V in video dhow oo dhan oo caan ah iyo qaabab audio sida MOV, AVI, wmv, MP4, MKV, 3GP , MP3 iwm maxay ka badan, waa ugu fiican Lugood M4V video Converter, oo awood u leh diinta iibsatay files Lugood M4V for loo maqli karo ee wax iPod, iPhone, iPad, Apple TV, PSP, telefoonada Android iyo qalab dheeraad ah.
1 files Add to Converter M4V ah
Kadib markii ay this video M4V Converter, aad u baahan tahay si ay u dajiyaan faylasha aad rabto in aad si loogu badalo. Si aad u samayn, waxaad tagi kartaa riix "Add Files" button xitaa your computer disk adag tahay inay helaan iyo shuban faylasha aad, ama si toos ah iyaga dajiyaan by fudud dhibic-dhibic oo. App wuxuu taageeraa oo dhan loo jecel yahay qaab video aqbasho.
App waxa ku jira qaabab wax soo saarka ku dhawaad ​​oo dhan loo jecel yahay, sida M4V, MP4, MOV, AVI, wmv, MKV, FLV, Jabbuuti, MP3 iyo wixii la mid ah. Sida looga baahan yahay, oo kaliya ay doortaan M4V ama qaab kale sida qaab wax soo saarka. Haddii aad loogu badalo ama ka files M4V kaliya loo maqli karo qalabka qaar ka mid ah, waxa kale oo aad dooran kartaa qaab si toos ah-filaayo in qalabka. Si aad u samayn, kaliya dooro mid sida ay model qalab aad.
Si aad u furato liiska qaabka wax soo saarka, riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad. Hadda, si xor ah u doortaan waxa aad rabto in aad halkan.
Haddii aad rabto in aad ku gubi video inay DVD, marka hore, waxaad u baahan tahay in ay soo dhoofsadaan files ee "Guba" interface. Dabadiisna, waxaad dooran kartaa DVD menu ah ka dibna riix "Guba" ee geeska midig ugu hooseysa interface ah si ay u bilaabaan DVD ku gubanayso.
Haddii aad doonayso in aad qabato shaqo tafatirka qaar ka mid ah ka hor inta diinta, kaliya ku dhufatey "Edit" doorasho, meesha aad la siiyaa qaar ka mid ah qalabka tafatirka caadi ah.
3 Beddelaan diinta M4V
Ugu dambeyntii, kaliya aad u baahan tahay in aad riix "Beddelaan" si aynu Converter M4V ka badalo files si aad u qaab aad rabto. Ka dib markii ay diinta ka, waxaad ka heli kartaa faylasha la gediyay sida Jidka Destination ama garaacida ah "Folder Open" doorasho.
Features Key ee M4V Converter
Beddelaan files M4V in kasta oo ku dhowaad qaabab kale effortlessly.
Beddelaan in files M4V ka kale oo videos inuu ka ciyaaro Lugood, iPhone, iPod, iPad iyo AppleTV iwm
Ka files M4V Waraaqda audio tayada audio dhawrsan.
Taageerada DVD gubashada iyo DVD diinta sida M4V in DVD iyo DVD in M4V.
Muuqaalada More sida video tafatirka iwm